Ụlị ahỤa gị n’Ụntanetọ ere nwere ब्लॉग?
O nwere ike ịbụ naanhe ihe dị g i mkpa iji mụbaa okporo ikezo, mee ka njirimara gị pụta ikehè, na ịkwọ ụgbọala। ỊtịpỊta ụlọ ahịa dị n’anntanetọ bụ nanị mmalite। Nz Nkwọụ ọzọ na-aranywanye elu na ụzụlite ahịa। Ịde blụgụ mgbe niile bu otu n’ime ọzọ kachasị mma isi mee ka bọl na-agagharọ.
D nnot ka anyị nọ n’otu peeji ah e, ​​ebe a bụ ụf’d n’ime uru dị oke ntanetị:
ओकोपो ụzọ: Nke mb blog, ब्लॉग da ka magnet na ebe nrụọrụ weeba gụ। Oge ụ bgela ip biputere ब्लॉग ụhụr a, a na-adọta nd a ahụa azụ na saịtị gị iji gụọ ya। साइट n’ebe ahụ, ọ b’nanere obere ngwep n na nzọụkwụ na peeji nke ngwaahịa gị। Ịdebe blỊgụ mgbe niile na-eme ka okporo ọzọ ना-अगरबनी, nke bụ isi ihe na-eme ka we gbanwee ahịa.
Njikụọ njikọta: Nke ab og, oge j b onla onye ahịa na – agị blog gụ, ha na – eche na ejikọrọ ha na akara gị। हा ना-अमात्कवु बाणेरे जी na मा-एतो इटो इजी त्क्वास्सु गाई। Ọn eg Ọgụgụ na-egosi na kar 95a 95% nke ndị ahịa adjghị njikere ịzụta n’aka gị ozugbo। हां मात्र, ज़लिटे हा नीके oमा रूबो मेग्बे हा डी ere नाइकेरे ụज़ुत्ता.
हा ना-एडुगा: ओगे ụ b -la mmad-na-ekere edkè gị, ebe nr er n weebụ gị ना-अबता ndị ahịa ọhụrụ। Ọ na-emepụta ọhỌrị na nwere ike iji nwayọọ nwaye gbanwee ka-na-akwụ ndị ahịa ụgwọ। Ọ b। आहỌा इफू ना मफ.
Nyocha njirimara खोज: Google hụrbe ebe nrụrụ weebụ na-emelite mgbe niile। हा ना-आ naखवा ब्लाọọगụ बर ịुरु द। ओमीमी। ऑनलाइन ना-ईचक्वा ना बिपुतेरे ब्लụगbe एमजीबे नाइल एक ना – ọrị elu karọa ndị na – enweghị। ओटू ब्लॉग ना-एनकेवा gị ohere iji ụtụti isiokwu ndy na-enyere Google aka ịghọta na gradorize azụmahịa gị। साइट ना –de blọgụ, en ga – enwekwa ike ịnye njikọta na ebe nr erụ weebụ gị, nke Google na – eji tụọ ikike gị। Mgbe glọ ahịa gbe n’ịntanetị du elu,-ga-enwetakwu okporo ụzọ, na ụtụtụ ahịa.
हां मात्र, किसी भी नील kwetara, ọde blụgị d, oke mma maka azịmahụa azụmahịa gị। नानक akụkụ dị egwu bị ọchụp ita ihe-ga-ede बरगद ब्लॉग। Nnukwu atụmatụ nwere ike inyere gka aka, m kwenyere na ya ike nke ịhazi ọdịnaya gị। एनवेला मी इहे ओले ना ओले आईजी मलाईट.
2 2. नगवाहा gị
3 3. नकुज़ी
4 4. नकुवwत
5 5. कच ụhụrụ ओरु समाचार
6 6. इकवु बनियरे अहिया न ननकुवु
7 7. क्रिएटिव हो जाओ!
8 8. डी इहे गबसार
अ ब्लॉग b ok nnukwu ikpo okwu iji gwa gụ akụkọ। Ịhapime ndị ahịa n’ime ịwa g-na-ewuli ntụkwasasayi। Ọ ना-एमे का एमएमकेọरịता डी, एमएमए, ना-एने उर्फ ​​मेए का एमएमकेaरọता डी’ एनटिटी जीị एन डीịị आहịा जीị.
गिरि ब्लॉग g i kọwaara ihe mere i ji malite ọlọ ọrụ, na ihe mere ngwaahịa ndị ahụ ji dị eịigbo mkpa। बुरु उज़ो, एन’ज़िओकवु, ना इमेघे, एनडीuz आहịा जी-गा-एट्कवासुक्वु जी ओबी.
Ị nwekwara ike iji ब्लॉग ka ndị ah ma mara ihe na-aga n’azhara Mpaghara। Gwa ha ihe-na-aga, ma k na ha na mgbasa ozi na-abịa। N’okpuru ebe a, lelee Helm (ọlk akpọkpọ ụkwụ akpụkpọ aụ) na-eme ka ndị na-agụ ya ruo ande ha na ntanetị.
2. नगवाहा gị
गिरि ब्लॉग gị iji gosi ndị ah ia ihe ụm gma gbasara ngwaahịa gị। Enwere nnw ihe ị ना-अगवा ndụ mmad ना ibe gị। ओटू ị डीú, साइट ना आईजी ब्लॉग, ere nereere ike inweta nkọwa zuru ezu karz। Ị nwere ike igosi ndị ah ota otú e si eji ya, otu esi eme ya, na ihe ụ bụla ọzọ dị mma.
Ọ ना-एन्येरे हा उर्फ ​​wमातवु बानेरे एनक्वाह -आ आहụ, ना-एमे का हा नवे इके ụzụta ya.
D ka ihe atụ, igwe na-eji nwayọọ nwayụ, bụ ụlụ kerọ nke na-emepụta nche na ighikota (ọ dị otu उर्फ)। हा ना-ईजी ब्लॉग हा kawaa otú ha si mee ha dhe iche। Ọ ना-एन्ये ndị आहị उर्फ ​​ọghaktakwu ụdị azịmahịa gị, na-eme ka ha nwee ike ụzụta ngwaahaa gị.
नेरे ndọ mmadụ उर्फ ​​ọghọta ihe gbasara ngwaahịa gị.
एक ब्लॉग bos ebe dị mma igosi gọ hamkachamara। Ọ b rỌ na Ọ nwere ike inye amamihe ma ụ bụ kụziere onye ahịa otú-ga-esi eme ihe, ozugbo it malitere mmọrịta। Ị गोसिपतारा ना Ị bọ hamkachamara n’oshịa gị, nke na-agba ndị ahịa ume wtụkwasị gị obi.
D ka ihe atụ, Maybelline na-ere ngwaah eta etemeete। हा ब्लॉग जपुतारा ना ndụm jda बर आउरु मा ना-एसि ना। Rịba ama otú ha si eji blụgk nkuzi nd i a iji gosi ngwaah .a हा। यूगबोरो अबb न-एगबक एगबक!
गोसिपट्टा ackachamara g n na ndọmụdụ ना ụzọ-aka
ब्लॉग g Blog b ma ụzọ dị mfe ma dfe mfe iji kpịsaa ngwaahọa ụhịrụ ma ụ bụ mee ememe dị ịrịba ama। Ihe omuma a di n ‘ozo na egosiputa ulo oru स्नीकर’ Ejuputa ahihia ‘n’ikwu ọkwa ohuru। Ọ b i Ọzọ dị mfe iji gosi ndị ahịa-na-etolite, na-echekwa ha.
Gbanyọ bdị akụki niile metaratara azụọmahịa gị
5. कच ụhụrụ ओरु समाचार
Ị nwere ike iji ब्लॉग gỊ na ọlọ ụrị gw। Ịkwusa nnukwu ozi anyma banyere ọlọ ọrụ gos na-egosi na ụ bụ nke oge na-egosi na ị nọ n .wa। Ọ b i Ọzọ dị mfe iji gosi hamkachamara gị, ma na-eburu ak ebkọ ọkụ ọkụ n’obi.
Akk n akụkọ dịka nke a na-achụpọ ọtụtụ okporo ụzo, karịsịa site na ndị na – ege ntị nke ọma – ndị na – eso ụlọ ọrụ ahụ nke kema nke.
Dka ịmụmaatụ, da ka ihe at, ere ahịa ngwá ọọrụ sọfụ। हा ना-एनवेगी इके ọkwụ porda okporo ghzọ साइट ना ụkụ akịkọ banyere asọmpi asọmpi na akụkọ ụlọ ọrụ:
दे बणेरे ओजी ओरु
6. इकवु बनियरे अहिया न ननकुवु
कोई भी na-amalite ịhụ blụgọọ blụg is na isiokwu। Ntak-एक? Maka otu Google nwere gosip ottara mmasa maka ogologo, na-agụ ihe omimi, ma mee ka ha dị elu। मा ọ b nkwa n’ihi na em na-eme ka ndọ mmadụ na saịtị gị dị ogologo ma na-enyekwu ozi। ओटू ụzu इशी मे नीके आहụ बोolog ओगोलोगो ओगे ‘आइच इचीची’ मा w बी ọव्वु ओक्वु न ụlọ ọrụ आहụ.
कोई भी kwuo na ere nereere ọlị ahịa ejiji ahịa, dọka uomịmaatụ। Ị nwere ike iji ब्लॉग gỊ ụza ajụjany banyere ọnọdị ndị na-adịbeghị anya। Ị nwere ike ịkatỊ ọlọ ụrj ejiji ma ụ b kwadoo ụfoodụ n’ime nsogbu ahụ (ihe ọ bụla si nụdụ iji aji)। नदो a na-eche na-na-ejikarọ bụmbị karịa gị.
7. क्रिएटिव हो जाओ!
इहे काचा मम्मा बनियारे kde blụgụ bwe enweghw iwu! Nwee echiche na iche n’èzí igbe। Ị nwere ike blogde ब्लॉग banyere ihe ụ b nla nwere njikọ ụf ngdụ na ngwaahịa gị na ụlọ ọrụ gị। Ọ bererỌ na ụ na-ere nri कारीगर, ब्लॉग बनिया ntụziaka ụ h’rị n’anya। एचेला न एनेरे गेरे इके इजी ọfụdoro usoro ma ụ bụ nt .ziaka। जिरी ब्लॉग gị iji gosi onwe gị.
नरी नइल न-ईजी एबे नृụ वेụ हा wa नगवाहाị नारी। ओटू wa डीú, हा ना-इजिकवा या केसा नकुज़ी इहे ओकेइक। Chta isiokwu maka ngwaahịa g ma, मा सरो य.
ब्लॉग बनिएर nikikọ nke ngwaahịa gụ na ịdhe ihe niile
8. डी इहे गबसार
Ụlụ Ụrụ ụ bỤla nwere kalenda pụrọ iche nke ihe omume। Ụlọ Ụrụ ọgbara ụhụrw nwere TechCrunch। Ụl-Ụrụ ndị na-atọ ịchw nwere Comic-Con। Ụlw ụrụ egwú nwere Coachella na SXSW। Ụlw ụrụ egwuregwu ndị dw egwu nwere X-Games। Ọ bererỌ na ụ na-ere ngwaah naa na ụrụ ndị a, gbalịa ịga ihe ndị a। डी n’aze ihe njirimara nke ना- etinye nd’ ahịa gị। Ọ ना-एगोसी हा ना Ọ n’obi ọlọ ụrụ gị। Ọza,-ना-एमे मेका केडिगवु ọdọnaya!
लीली ओटू ओटू ọlọ ah ota ejiji eji पेरिस फैशन वीक tinye ihe ọh’r blog n’ime ब्लॉग.
Dka ị pụrụ ịh en, enwere ịtụtị echiche okike n’ebe ah’ ka ite malite ọde blọgụ। Jiri aghirighọ ndị a, ị dịghwakwa mgbe-ga-enwe nsogbu साइट ना ओनये डेरे एडेमेड ọzọ! Ka-dụ ugbu a, ọ ga-ahpor okporo ịzị na ahịa gal na-amalite itemalite elu.
Ụlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere blogg? O nwere ike ịbụ naanị ihe dị
Ọlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere ბლოგი? O nwere ike ịbụ naanị ihe dị
Ụlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere blog? O nwere ike ịbụ naanị ihe dị
Ọlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere blog? Owke ike ịbụ naanị ihe dị gị
Ọlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ n ήταν blog? Όχι ụbụ naanị ihe dị gị
Ọlọ ahịa gị n’ịntanetị we ei ollut blogi? Oi, ike ịbụ naanị ihe dị
9 plugins WordPress essentiels pour tous les débutants
OA ka Inside Scoop ma nā Pae Lāhui
Kako samostalno objaviti svoju knjigu br. 3: 5 načina prodaje svoje samostalno objavljene knjige
10 famose società di sviluppo di plugin WordPress negli Stati Uniti
Wou Dir gitt Paie Blogger bókinni
Ο οδηγός για αρχάριους για διοχετεύσεις πωλήσεων (και πώς να δημιουργήσετε τη δική σας)